စပါးကိုဘယ်လိုအောင်မြင်စွာစိုက်ပျိုးနိုင်မလဲ - စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ဆန်ကြိတ်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာ
ဆန်သည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေအများစုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဓိကအစားအစာဖြစ်သည်. ကမ္ဘာပေါ်မှာကျယ်ပြန့်တဲ့hasရိယာရှိတယ်. စားသုံးနိုင်သောအပြင်, ဆန်ကိုလည်းစပျစ်ရည်ပြုလုပ်ရာတွင်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည် ,နှင့်သကြားထုတ်လုပ်မှုအတွက်စက်မှုကုန်ကြမ်းအဖြစ်, ဆန်ခွံနှင့်ဆန်ပင်များသည်ကြက်အစာကိုကျွေးမွေးနိုင်သည်. အရည်အသွေးမြင့်ဆန်သည်ဈေးကွက်တွင် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားသည်. နိုင်ငံများစွာ၏အချို့ဒေသများတွင်, အိမ်ထောင်စုတိုင်းနီးပါးစပါးစိုက်ကြသည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, စပါးရိတ်သိမ်းချိန်မှ စ၍ ရိတ်သိမ်းချိန် ၄ မှ ၅ လခန့်ကြာသည်, ကြီးထွားလာသည့်ကာလအတွင်းအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အထွက်နှုန်းမြင့်စပါးကိုမည်သို့စိုက်ပျိုးရမည်နည်း?
အသင့်တော်ဆုံးမျိုးသည်တစ်ခုမှာအကောင်းဆုံးသောလယ်သမားနှင့်စားသုံးသူများ၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အထွက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးကိုအမြဲပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲမြေဆီလွှာအမျိုးအစားအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်, နှင့်လယ်ပြင်မြင့်, ရာသီဥတုနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်.
သီးနှံကာလ•ကြာရှည်မျိုးများ (160 ရက်နှင့်ကြာကြာ) ဆည်မြောင်းဒေသများနှင့်ရေလွှမ်းမိုးနိုင်သောဒေသများအတွက်သင့်လျော်သည်•အလယ်အလတ်ကာလမျိုးကွဲများ (120-140 ရက်) မိုးရေနှင့်ဆည်ရေareasရိယာနှစ်ခုလုံးအတွက်သင့်လျော်သည် (ထက်ငယ်သော 120 ရက်ပေါင်း) မိုးခေါင်ရေရှားနိုင်သောဒေသများသို့မဟုတ်သီးနှံနှစ်မျိုးစိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သည်.
ကောက်ပဲသီးနှံအမြင့်•မြင့်မားသောမျိုးပေါင်း (1.4 မီတာနှင့်အထက်) ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်နှင့်မတတ်နိုင်သောလယ်ကွင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်, တည်းခိုခန်းပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. •အလတ်စားအမျိုးပေါင်း (1-1.2 m) အများဆုံးဒေသများအတွက်သင့်လျော်သောနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုသည့်အခါတည်းခိုခန်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မရှိကြပေ. •အတိုမျိုးများအထူးသဖြင့်ဆည်ရေပေးသောနေရာများတွင်လယ်ကွင်းများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်.
သူတို့ကဓာတ်မြေသြဇာကိုတုန့်ပြန်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တော့နည်းတယ် 1 အမြင့်မီတာ. အထွက်နှုန်းကောင်းခြင်းအပေါ် မူတည်၍ မျိုးများကိုရွေးချယ်သင့်သည်, ရောဂါခုခံ, ကောင်းသောအစားအစာအရည်အသွေးတွေ, မြင့်မားသောကြိတ်အထွက်နှုန်း, နှင့်စျေးကွက်အတွက်သင့်တော်သည်။ ဆန်အရည်အသွေးနှင့်အရသာသည်စျေးကွက်တွင်တင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်. မကြာခဏမွှေးကြိုင်မျိုးပေါင်းများအတွက်ပေးဆောင်, ဒါပေမယ့်အထွက်နှုန်းပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်ဖြစ်ကြသည်. ချက်ပြုတ်ထားသောဆန်သည်နူးညံ့ပြီးအရသာသည်ဈေးကွက်တွင် ပို၍ လူကြိုက်များသည်.
ကျောက်တုံးများနှင့်မသန့်ရှင်းပါ, မြေဆီလွှာ, သို့မဟုတ်ပေါင်းပင်မျိုးစေ့;
တ ဦး တည်းအမျိုးမျိုး၏အစေ့များပါဝင်သည်သန့်စင်သော
အရည်အသွေးမြင့်သောမျိုးစေ့များကိုအသိအမှတ်ပြုမျိုးစေ့အဖြစ်ဝယ်ယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်လယ်သမားမှထုတ်လုပ်နိုင်သည်. အရည်အသွေးမြင့်သောမျိုးစေ့သည်လိုအပ်သောမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုလျော့ကျစေပြီးခိုင်မာစေသည်, ကျန်းမာပျိုးပင်, ပိုမိုမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းနှင့်အတူတစ်ပုံစံတည်းသီးနှံရလာဒ်များ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် ,လယ်သမားကစပါးမျိုးစေ့တွေပြင်ဆင်သင့်တယ် .
ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောလွယ်ကူသောစနစ်များနှင့်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သောအဆင့်ဆင့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ. 2. သန့်ရှင်းသုံးပါ, စင်ကြယ်သည်, နှင့်ကျန်းမာသောအမျိုးအနွယ်. 3. မျောမထားသောမျိုးစေ့များကိုမစိုက်ပျိုးမီဖယ်ရှားပစ်ပါ. 4. အချိန်မီစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအလေ့အကျင့်များကိုအသုံးပြုပါ, ဓာတ်မြေသြဇာလျှောက်ထား, မတိုင်မီဖြုန်း 21 တည်ထောင်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း, နှင့်ပေါင်းပင်မျိုးစေ့ကိုသွားခွင့်မပြု. 5. ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောပုံပေါက်သောစပါးပင်အားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်လယ်ကွင်းများကိုလှောင်ပြောင်ပါ, ပန်း, နှင့်စပါး - ဖြည့်အဆင့်ဆင့်. 6. ကောက်ပဲသီးနှံ၏ ၈၀ မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကောက်ရိုးအရောင်သို့မဟုတ် ၂၁ မှ ၂၂% အစိုဓာတ်ဖြစ်သည့်အခါရင့်မှည့်သောအသီးများကိုရိတ်သိမ်းပါ. 7. စပါးရိတ်ရာကာလအပြီးမြန်ပြီးခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ. 8. မျိုးစေ့များကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းပြီးအမျိုးမျိုးသောအမည်နှင့်ရိတ်သိမ်းမည့်နေ့စွဲပါသောကွန်တိန်နာသို့မဟုတ်အိတ်များကိုတံဆိပ်ကပ်ပါ.
ပထမ ဦး ဆုံးသို့မဟုတ်မူလတန်းလယ်ထွန်. ပေါင်းပင်များကိုသတ်ခြင်းနှင့်သီးနှံများကျန်ကြွင်းစေခြင်းများအတွက် disc သို့မဟုတ် moldboard ထယ်ကိုသုံးပါ, ဖြစ်နိုင်ဆုံးအများဆုံးအနက်နှင့်အတူမစိုက်ပျိုးမီ 6-8 ပတ်ကြာ 10 စင်တီမီတာ.
ဒုတိယထယ်. အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ခုံးအရွယ်အစားလုပ်ရန် disc သို့မဟုတ် tine harrow ဖြင့်လယ်ကွင်းကို ဖြတ်၍ ထွန်မည်. ဒုတိယထွန်ကိုမစိုက်ပျိုးမှီ ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်အပြီးနောက်ဆုံးရိတ်သိမ်းရမည် 1 အများဆုံး 5-7.5 စင်တီမီတာနှင့်အတူမစိုက်ပျိုးမီတစ်ပတ်. Bunds တွေကိုပြင်ပါ, ကြွက်ရိုးကိုဖကျြဆီး, မည်သည့်တွင်းနှင့်အက်ကြောင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ, နှင့် bunds recompact. အနည်းဆုံး Bunds ဖြစ်သင့်သည် 0.5 မီတာအမြင့်နှင့် 1 မီတာ wide.A ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားခြင်းနှင့်ညှိပြီးလယ်ပြင်ယူနီဖောင်းပေးသည်, ပေါင်းပင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ကျန်းမာသီးနှံ, ရေနည်းနည်းသုံးပါ, နှင့်ပိုမိုနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာပိုမိုမြင့်မားအထွက်နှုန်းပေးပါ. ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသောလယ်ကွက်ရှိသည်: ကောင်းမွန်သောမျိုးစေ့မြေဆီလွှာနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောသေးငယ်သောမြေဆီလွှာအစိုင်အခဲများ - အရွယ်အစားနှင့်မျိုးစေ့အရွယ်အစားသည်တူညီကြသည်; ပေါင်းပင်မရှိပါ; မှာပိုခက် plowlayer 10 ရေထိုးဖောက်မှုကိုရပ်တန့်ရန်စင်တီမီတာ;အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် level နှင့်ချောမွေ့မျက်နှာပြင်; ကောင်းမွန်စွာဆောက်လုပ်ထားသောအစုအဝေးများ။ လယ်ကွင်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းကပိုမိုကောင်းမွန်သောရေလွှမ်းခြုံမှုကိုပေးလိမ့်မည်, ပိုကောင်းတဲ့သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးတည်ထောင်ခြင်း, နှင့်ပိုကောင်းပေါင်းပင်ထိန်းချုပ်မှု. တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ကြဲချိန်တွင်ရေရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်မြေကြီးတူးခြင်းကိုအနည်းဆုံး ၁-၂ ရက်အလိုတွင်ပြုလုပ်သင့်သည်.
ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအချိန်မီစိုက်ပျိုးခြင်းသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာစေသည်, အထွက်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားပြီးပေါင်းပင်များနှင့်ပိုးမွှားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့်ယူနီဖောင်းသီးနှံများ. စိုက်ပျိုးရန်အကောင်းဆုံးသောနေရာသည်ဒေသပေါ်တွင်မူတည်သည်, အမျိုးမျိုး, ရေရရှိမှု, နှင့်အကောင်းဆုံးစပါးရိတ်ရာကာလအချိန်. ဆန်ကိုပျိုးခင်းမှအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်လယ်၌တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့များစိုက်ပျိုးနိုင်သည်. အစားထိုးကောက်ပဲသီးနှံများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အချိန်နည်းပါးသော်လည်းစုစုပေါင်းသီးနှံကာလအတွက် ၁၀-၁၅ ရက်ပိုကြာသည်. နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်, ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသည့်ပျိုးပင်များလိုအပ်သည်.
နောက်ဆုံးထယ်ခြင်းမပြုမီသို့မဟုတ် Basal ဓာတ်မြေသြဇာကိုအသုံးပြုပါ 10 တည်ထောင်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း.
အမျိုးအနွယ်ကို pre- အပင်ပေါက်ရန်အတွက်. အဘို့အမျိုးစေ့စိမ် 24 နာရီ, ပြီးတော့အဘို့အယိုစီး 24 ရေဖုံးလွှမ်းနေသောမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အညီအမျှမထုတ်လွှင့်မီအရိပ်ထဲတွင်နာရီ.
မျိုးစေ့ကိုကြိုတင်အပင်ပေါက်ရန်ကြိုတင်မှာယူသည် 100 ကီလိုဂရမ် / ဟက်တာ
အပေါ်ယံရေကိုသဘာဝသို့သဘာ ၀ သို့စီးဆင်းစေခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုပါ
အမြဲတမ်းရေကိုတည်ထောင်ပြီးနောက် ၁၀-၁၅ ရက် (သို့) ၂-၃ တွင်ထည့်ပါ- အရွက်ဇာတ်စင်.
အမြဲတမ်းရေထည့်ပြီးနောက် Basal ဓာတ်မြေသြဇာကိုသုံးပါ.
မှာခြောက်သွေ့သောမျိုးစေ့ကိုလက် 100 ကီလိုဂရမ် / ဟက်တာသို့မဟုတ်စက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအနွယ်ကို 80 ကီလိုဂရမ် / ဟက်တာနှင့် 20 မီလီမီတာအတိမ်အနက်
မျိုးစေ့လေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့် Basal ဓာတ်မြေသြဇာကို Apply
သည်အထိရေလွှမ်းမိုးသည် 15 ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် (၂) ရွက်စင်မြင့်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်တွင်အမြဲတမ်းရေထည့်ပါ.
ကြောင်းပျိုးခင်း site ကိုရွေးချယ်ပါ 1/10 ရည်ရွယ်စိုက်ပျိုးareaရိယာ၏အရွယ်အစား.
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်နှင့်ကြဲခြင်း. အဘို့အမျိုးစေ့စိမ် 24 နာရီ, ပြီးတော့အဘို့အယိုစီး 24 အရိပ်ထဲမှာနာရီ. မျိုးစေ့ကိုပျိုးခင်းတွင်ထုတ်လွှင့်သည်, အဆိုပါ watercovered မြေဆီလွှာမျက်နှာပြင်ကျော်.
အမျိုးအနွယ်ကို Apply: 30-40 ကီလိုဂရမ်မျိုးစေ့များ / ဟက်တာရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုး.
ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်းအသက်: ကာလတိုအလတ်စားမျိုးများလိုအပ်သည် 20-30 ရက်နှင့်ကြာရှည်မျိုးကွဲလိုအပ်သည် 20-40 အစေ့ပြီးနောက်ပျိုးခင်း၌ရက်ပေါင်း.
ပေါင်းပင်များသည်ဆန်ပင်များနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီးဆန်အထွက်နှုန်းကိုလျှော့ချသည်. တစ်ခုချင်းစီကို 1 ပေါင်းပင်၏ကီလိုဂရမ်ခြောက်သွေ့သောအရာနှင့်ညီမျှသည် 1 ကီလိုဂရမ်စပါးကိုဆုံးရှုံး. ပေါင်းပင်များသည်သီးနှံစိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက် ၂၀ မှ ၅၀ အတွင်းအထွက်အများဆုံးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသည်. နောက်အပင်များတွင်မျိုးစေ့များကြဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်အနည်အပင်ပေါက်ပြီးနောက်ပေါင်းပင်သည်အရေးကြီးနိုင်သည်.
ထွန်ယက်။ ထွန်ယက်ခြင်းအားအနည်းဆုံး ၁၀-၁၄ ရက်ခြားပြီးသို့မဟုတ်မိုးရွာပြီးနောက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်.
ရေရှည်တွင်အမြဲတမ်းရေကိုအသုံးပြုပါ - ပေါင်းပင်များသည်ရေအောက်တွင်မပေါက်နိုင်ပါ.
ပထမ ဦး ဆုံးပေါင်းသင်းခြင်းကိုတည်ထောင်ပြီးနောက် ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်အတွင်း၊ နောက် ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်အတွင်းတွင်စတင်သည်. ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးမပြုမီပေါင်းပင်.
ပေါင်းသတ်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်း. ပေါင်းပင်များကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးတံဆိပ်ပေါ်တွင်အကြံပြုထားသည့်သင့်လျော်သည့်ပေါင်းသတ်ဆေးကိုသုံးပါ. •ပေါင်းပင်များသည်သေးငယ်သောအခါလေမှုတ်ပါ.
ပေါင်းသတ်ဆေးများသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်; အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုစနစ်တကျမသုံးပါကကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ကလေးများလက်လှမ်းမမီသောသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့. •လေမှုတ်သောအခါအကာအကွယ်အဝတ်အစားများကိုအမြဲသုံးပါ.
မြေဆီလွှာအများစုသည်သီးနှံအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာလိုအပ်သည်, ထို့ကြောင့်ကောက်ပဲသီးနှံများအထွက်နှုန်းတိုးစေရန်မြေသြဇာများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်. အချို့ကိစ္စများတွင်, မြေသြဇာကောင်းမွန်စေရန်ဓာတ်မြေသြဇာများကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်. အသုံးပြုသောဓာတ်မြေသြဇာပမာဏနှင့်အမျိုးအစားကိုထိုယူဆချက်ပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်သည် 1 စပါးတစ်တန်ဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ် 15 နိုက်ထရိုဂျင်ကီလိုဂရမ် (N), 2-3 ကီလိုဂရမ်ဖော့စဖရပ် (P), နှင့် 15-20 ကီလိုဂရမ်ပိုတက်စီယမ် (ငွေကျပ်). ဤအခြေခံနှုန်းများကိုမြေအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်, ရာသီဥတု, သီးနှံအခြေအနေ, ရေပန်းစားသောရာသီဥတုအခြေအနေ, နှင့်လျှောက်လွှာ၏ထိရောက်မှု. ထိရောက်သောဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုရန်:
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုသုံးပါ (ချေး, ဆွေး, ကောက်ရိုး, သတိရ, အရွက်) ဖြစ်နိုင်ရင်, အထူးသဖြင့်ပျိုးခင်းများတွင်.
မြေဆီလွှာအမျိုးအစားနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အထွက်နှုန်းအရဓာတ်မြေသြဇာကိုအသုံးပြုပါ. လမ်းညွှန်အဖြစ်, က2ရွှံ့စေးမြေပေါ်တွင် t / ဟက်တာအထွက်နှုန်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် 20 ကီလိုဂရမ် N နှင့်5ကီလိုဂရမ် P. သဲမြေများသည်နောက်ထပ် ၁၀-၁၅ ကီလိုဂရမ်လိုအပ်သည်. တစ် ဦး အဘို့ဤအကြံပြုချက်များကိုနှစ်ဆ3t / ဟက်တာအထွက်နှုန်းမျှော်လင့်ထား.
အားလုံး P ကို ​​Apply, ငွေကျပ်, နှင့် 10% N အညီအမျှနှင့်မျိုးစေ့များသို့မဟုတ်မစိုက်ပျိုးမီ့ထည့်သွင်းပါ. တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ထုတ်လွှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်, လယ်ပြင်၌ရေရှိသည့်နောက် ၁၀-၁၄ ရက်အပြီးတွင်လျှောက်ထားရန်အဆင်ပြေသည်.
ကျန်ရှိသော N ကို Apply (ယူရီးယား) in2မှာတန်းတူဝေမျှ 30 ရက်ပေါင်း 50-60 ရက် (panicles စတင်) ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်. •သတ်မှတ်ထားသောကောက်ပဲသီးနှံများတွင်, ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာကိုရပ်နေသည့်ရေတွင်သာမကမြေတပြင်လုံးတွင်အညီအမျှအသုံးပြုနိုင်သည်.
ရိုးရှင်းသောမျိုးများအတွက်ဓာတ်မြေသြဇာအမြောက်အများကိုမသုံးပါနှင့်၊ ၎င်းတို့သည်တုန့်ပြန်မှု နည်း၍ တည်းခိုခန်းများဖြစ်စေနိုင်သည်.
သင်ပိုမိုလိုအပ်လျှင်ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာကိုမသုံးပါနှင့်5များအတွက်ပေးဆောင်ရန်စပါးကီလိုဂရမ် 1 ဓာတ်မြေသြဇာ၏ကီလိုဂရမ်. •အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများသည်ကလေးများလက်လှမ်းမမှီနိုင်သောခြောက်သွေ့။ အေးမြသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရမည်.
လယ်သမားများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေဆုံးရှုံးကြသည် 37% ၎င်းတို့၏သီးနှံများကိုပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများသို့နှစ်စဉ်ပို့ပေးသည်. ကောင်းမွန်သောသီးနှံစီမံခန့်ခွဲမှုအပြင်, အချိန်မီနှင့်တိကျသောရောဂါသိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်. ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါပြproblemsနာများအတွက်အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်မှုမှာကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်. ဆန်စပါးတွင်ပိုးမွှားနှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုကန့်သတ်ရန်, အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာနိုင်ပါသည်:
အမှိုက်များနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်ရာသီအလိုက်လယ်ကွင်းများကိုသန့်ရှင်းစေပါ, နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် & Bunds ပြုပြင်.
သန့်ရှင်းသောမျိုးစေ့များနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများကိုအသုံးပြုပါ. •အသိအမှတ်ပြုအမျိုးအနွယ်ကိုအကြံပြုသည်. သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအနွယ်ကိုမရရှိနိုင်ပါ, အရောင်ပြောင်းသောမျိုးစေ့မရှိသောစင်ကြယ်သောမျိုးစေ့ကိုအသုံးပြုပါ, ပေါင်းပင်အစေ့များသို့မဟုတ်အခြားရောနှောထားသောစပါးမျိုးများ. •အင်းဆက်ပိုးမွှားပိုးမွှားများလျော့ကျစေရန်ကာလတိုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအပင်များကိုသုံးပါ.
သင်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်စိုက်ပါ (ဒါမှမဟုတ်အတွင်း2တပတ်ပြတင်းပေါက်) အင်းဆက်ပိုးကို minimize ရန်, ရောဂါ, ငှက်, နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီလယ်ကွင်းအပေါ်ကြွက်ဖိအား.
သဘာဝပိုးမွှားရန်သူများကိုအားပေးပါ. •ပိုးသတ်ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲတာဟာလယ်သမားတွေကြားမှာဖြစ်လေ့ရှိပြီးအမှန်တကယ်ပိုးမွှားဖြစ်ပွားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. •ပိုးသတ်ဆေးများကပ်မိလျှင်ပိုးမွှားကပ်ဘေးများ၏သဘာဝရန်သူများသေဆုံးသည်.
အတွင်း၌ပိုးသတ်ဆေးမသုံးပါနှင့် 40 စိုက်ပျိုး၏ရက်ပေါင်း. •စပါးသီးနှံများသည်အထွက်နှုန်းကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲစောစီးစွာပျက်စီးခြင်းမှပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်. •စောစီးစွာစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည့်တိကျသောရောဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်လျော်သောအချက်အလက်များရယူပါ. သီးနှံတွင်ပိုးမွှားသို့မဟုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများရှိပါက, ပြproblemနာကိုတိကျစွာရှာဖွေရန်အရေးကြီးသည်. ရောဂါနှင့်အတူအကူအညီတောင်းသည်, ပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှအကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ.
ပိုးမွှားနှင့်ရောဂါထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ဓာတုသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ, အဲဒါအရေးကြီးတယ်: •စနစ်တကျချိန်ညှိထားသောကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောရေမှုန်များသုံးပါ; •ထုတ်လုပ်သူမှအကြံပြုသောသောက်သုံးသောပမာဏကိုသုံးပါ; •ဆေးရောနှောခြင်းနှင့်ပက်ဖြန်းခြင်းအတွက်လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများကိုလိုက်နာပါ.
ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်းသည်အထွက်နှုန်းနှင့်သီးနှံအရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. စော။ ရိတ်သိမ်းသောကောက်ပဲသီးနှံများသည်မပြည့်စုံသေးသောရင့်ကျက်မှုများစွာရှိလိမ့်မည်။. ကောက်ပဲသီးနှံများနှောင်းပိုင်းတွင်ရိတ်သိမ်းကြသည်, ချိုးနှိမ်ခြင်းနှင့်ငှက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများကြောင့်အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်. စပါးရာသီဥတုကြောင့်အရည်အသွေးလည်းကျဆင်းလိမ့်မည်, မလိုလားအပ်သောဘောဇဉ်အရောင်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အဆင့်လျှော့ချခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့. သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်တွင်ရိတ်သိမ်းသင့်သည်:
ကောက်ပဲသီးနှံအစိုဓာတ်သည် ၂၀ မှ ၂၂% အတွင်းရှိသည်။, ပုံမှန်အားဖြင့်အကြောင်းပါ 30 ပန်းပွင့်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း;
80ကောက်ပဲသီးနှံ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပန်းပွင့်များဖြစ်သည်;
panicles ၏အနိမ့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်အစေ့ခက်ခဲဖြစ်ကြသည်, မပျော့ဘူး; နှင့်
ညှပ်သောအထိတ်တလန့်များသည်ကြီးမားသောအထုပ်များအတွင်းကျန်ရှိနေသောအချိန်ကာလကိုအနိမ့်ကျစေပြီးအတွင်း၌နယ်ပါ 24 ဖြတ်တောက်ခြင်း၏နာရီ;
အခြောက်လှန်းပြီးနောက်ထပ်ခါတလဲလဲနောက်တစ်ဆင့်အားဖြင့်စပါးကိုသန့်ရှင်းရေး; နှင့်အေးမြသောဆန်ထဲမှာသိုလှောင်, ခြောက်သွေ့, နှင့်သန့်ရှင်းသော--ရိယာ - ဖြစ်နိုင်သည်အစေ့များအတွက်တံဆိပ်ခတ်ကွန်တိန်နာအတွက်.
စပါးစိုက်ပျိုးချိန်မှာ ,pရိယာ၏အခြေအနေများနှင့်အညီပြင်းထန်သောရောဂါခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများကိုရွေးချယ်ရန်လယ်သမားလိုအပ်သည်, မျိုးစေ့ကြဲချိန်တစ်ချိန်နှင့်အညီမွေးမြူခြင်းနှင့်သန်စွမ်းသောပျိုးပင်များ၏ဆင်ခြင်တုံတရားကိုသေချာစေရန်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ပျိုးပင်, ဆန်စပါးအထွက်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေမည့်အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုနှုန်းအရမြေသြဇာနှင့်ဆည်မြောင်းစနစ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်.